Saraakiil Liibiyaan ah oo lagu dilay qarax lala beegsaday wasaaradda arrimaha dibadda - Halbeeg News
Saraakiil Liibiyaan ah oo lagu dilay qarax lala beegsaday wasaaradda arrimaha dibadda
TRIPOLI (HALBEEG)- Laba sarkaal oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Liibiya ayaa kamid noqday dadka ku dhintay qaraxyo iyo israsaaseyn ka danbeysay oo lala beegsaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Libya ee ku taalla magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaasi.
Qarax ismiidaamin ah ayaa lala beegsaday xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha dibadda Liibiya, waxaa intaasi raacday israsaaseyn iyadoo ugu danbeyntiina ay isqarxiyeen ragii rasaasta ridayay.
Sida uu sheegay wariye Aljazeera uga soo warama Tripoli, laba qof oo midna askari ahaa midna shaqaalaha wasaaradda kamid ahaa ayaa ku dhintay qaraxyada.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters saddexdii qofood ee weerarka soo qaaday ayaa mid kamid ah waxaa toogtay ilaaladii xarunta wasaaradda halka labada kalena ay is qarxiyeen.
Wasaaradda caafimaadka ee Liibiya ayaa sheegtay in ugu yaraan sagaal qof ay ku dhaawacmeen weerarka iyadoo ilo wareedyo sirdoon ah oo diiday in magacooda la xigto ay sheegeen in weerarka uu ka danbeeyay ururka Daacish.
Sida lagu xaqiijiyay cod laga helay wasaaradda, Wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Al-Taher ayaa ka maqnaa xarunta xilligii weerarka waxaana la sheegay in uu la socday Raiisul wasaaraha dalka Liibya, Fayez Alsarraaj oo xiligaa booqasho ku joogay magaalada Zawiya.
Weli ma jirto cid sheegatay masuuliyadda weerarkan lala beegsaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya
Warar sirdoon oo ka digaya weerarro al-Shabaab ay ka fuliyaan caasimadaha Geeska Afrika
Guddiga ammaanka doorashada Puntland oo mamnuucay in hub lagu dhex qaato Garoowe